Raysal wasaraha Dalka oo kula kulmay Muqdisho mas'uul sare oo ka tirsan dowlada UK - Get Latest News From Horn of Africa
Raysal wasaraha Dalka oo kula kulmay Muqdisho mas’uul sare oo ka tirsan dowlada UK
By WARIYAHA CAALAMKA On Jun 9, 2019
Ra’iisul Wasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa maanta oo Axad ah Muqdisho kula kulmay Agaasimaha Siyaasadda wasaarada arrimaha dibadda Ingiriiska, Richard Moore.
Xafiiska Khayre ayaa shaaciyey in dhinacyadda kulankooda ay diiradda ku saareen xoojinta “iskaashiga labadda geesood ah ee dib u habeynta dhaqaalaha, amniga, siyaasada iyoo barnaamjiyadda horumarinta”.
“Waxaa sharaf ii ah in aan qaabilo Richard Moore, agaasimaha siyaasadda Boqortooyadda Ingiriiska,” ayuu yiri Khayre oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay Twitter-ka.
Moore, sidda ku sooyaal nololeedkiisa, ayaa horey u soo noqday Lataliyaha Amniga Qaranka UK iyo safiirada wadankaasi u qaabilsan wadanka Turkiga.
#Maamulka Kismaayo Oo ka Gilgishay Qoraaladii ka soo kala…
#Xoogga dalka oo howlgalo dad lagu soo qab qabtay ka…
Danjiraha Ingiriiska u fadhiya magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho, Ben Fender iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa waxay goobjoog ka ahaayeen kulankii maanta.
Kulanka Khayre iyo Richard Moore ayaa wuxuu kusoo aadayaa iyadda oo Sabtidii xero tababar oo ay Britain hirgelisay laga daah-furay magaaladda Baydhabo, xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed
Isla shalay waxaa xaruntaasi tababar loogu furay askar boqolaal gaareysa xili kuwa kale loosoo xiray tababar, kuwaasi oo loo diyaariyey in ay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah xoogaga Al-Shabaab.
Degaanada maamulka Koonfur Galbeed oo ay ku xoogan tahay kooxda gacansaarka la leh Al-Qaacida ayaa la rumeysan yahay in ay kamid yihiin meelaha ay kooxda kasoo abaabusho weerarad ay Muqdisho ka geysato.
5 hours ago 31,209
#Waddani oo ka baxay heshiiskii xisbiyadda Somaliland ee…
17 hours ago 97,136
#Al shabaab oo soo bandhigay magacyada iyo qabiilada Raggii…
17 hours ago 12,584
#XFS oo ka badbaaday in ay magdhow siiso ajnabi lagu xiray…
17 hours ago 24,748
#Taliyaha Ciidanka Uganda: Soomaaliya oo xasiloon waa…
Aug 18, 2019 78,134
#Battle for Jubbaland escalates as…
Aug 18, 2019 2,113
#Natiijada Doorashada Jubaland oo Ay…
Aug 18, 2019 2,678
#Warbixin “Jidka Dawladnimada iyo…
Aug 17, 2019 12,618